Famaranana: sa tsara sa ratsy ho an'ny tranonkalanao? - Ny valiny nataon'i Khachaturyan Nataliya, Semalt Expert
Khachaturyan Nataliya, Semalt Ny Strategist Content, dia manazava fa ny cloaking dia azo lazaina ho teknolojia mainty SEO nampiasaina hanatsarana ny fizotry ny SEO amin'ny fisafotofotoana ny fikarohana s. Ny fomba fanao dia ny maneho ny votoaty samihafa amin'ny mpitsikilo sy ny mpampiasa tranonkala. Ny ankamaroan'ny tompon'ny tranonkala dia alaim-panahy hampiasa ny fitrandrahana amin'ny fanatsarana ny endriky ny pejy finday.
Ny fanakatonana dia fanitsakitsahana ny torolalan'ny manam-pahaizana Google izay mety hitarika amin'ny famaizana. Ireto misy ohatra sasantsasany momba ny fitsangatsanganana:
Mampiditra teny fototra iray aorian'ny fangatahan'ny motera fikarohana. Amin'ity tranga ity, raha mitady olona ilay lahatsoratra izay tsy hahita azy, fa ny fikarohana iray dia mahita fa manatsara ny valin'ny fikarohana izany - vps gratis 90 dias.
Mampiseho pejin-peo HTML afa-tsy amin'ny milina fikarohana raha toa ka afa-mahita sary na Flash ihany ny tranonkala.
Miasa amin'ny famitahana ny mpitsikilika amin'ny fikarakarana fikarohana mba ahafahana mihevitra fa ny votoatin'ny pejy dia tsy mitovy amin'izay azy. Azonao atao ihany koa ny lazaina ho toy ny motera fikarohana na ny fanodinana motera fikarohana nampiasaina hanodinana ny motera fikarohana mba hanomezana tranokala iray manokana ho laharam-pahamehana.
Ahoana no fomba nanaovana famokarana?
Ny ankamaroan'ny olona dia mahatsikaritra ny fitrandrahana, saingy tsy fantany hoe tena manao ahoana izy io. Tsy takatr'izy ireo ny fomba anehoan'ny votoaty tranonkala ho an'ny karoka fitadiavam-bola hafa amin'ny zavatra hitan'ny mpiserasera..Amin'ny sehatry ny aterineto, ny fitaovana aterineto tsirairay dia voamarina amin'ny adiresy IP. Rehefa mampihatra ny fanakanana, ny votoaty mifototra amin'ny mpampiasa-Ny lohan'ny HT HTTP na ny adiresy IP an'ny mpampiasa izay mangataka ny votoatiny.
Ny Cloaking dia mamela ny .htaccess hahatratrarana ny tanjona. Izy io dia ahitana modely fantatra amin'ny hoe mod rewrite izay manampy amin'ny fampiharana ny fitsangatsanganana ao amin'ny tranonkalanao. Izy io dia manampy ny htaccess hampifangaroana ny milina fikarohana mba ahafahan'ny tranonkala hahazo toerana ambony. Ny modely dia afaka manavaka ny adiresy IP an'ny mpitsidika iray tsy tapaka avy amin'ny an'ny milina fikarohana. Raha hitany ny adiresy IP an'ny milina fikarohana, dia mamela ny script-seriver-n'ny seriver izy mba hamoahana andian-pejy amin'ny tranonkala. Raha toa ny adiresy IP tsy ho an'ny mpikirakira, ny mod rewrite dia mahafantatra fa izy dia mpitsidika tsy tapaka ary mampiseho pejy web misy izany.
Karazana karazana makotrokotroka
Ny adiresy IP mifototra - Ity dia tetikady fampisehoana dikan-teny miafina mifototra amin'ny adiresy IP an'ny server. Ny adiresy IP an'ny milina fikarohana dia mamela azy handray votoaty samihafa raha toa ka mahazo dika hafa ny adiresy IP hafa rehetra.
Ny mpividy ny mpikaroka - Amin'ny alalan'ity drafitra ity, dia manolotra pejy maromaro na tranonkala mifototra amin'ny mpampiasa ny mpanonta
HTTP-REFERER manakona - Ireo mpampiasa samihafa mampiasa tranonkala manokana dia atolotra ny dikan-teny samihafa amin'ny votoatin'ny tranonkala mifototra amin'ny lanjan'ny lohan'ny HTTP REFERER.
HTTP Accept-Language Heading Cloaking - Ireo dikan-teny ankapobeny voaray dia hita amin'ny fitenin'ny tranonkala.
Mety hampidi-doza ny fanafihana, ary tokony hisoroka izany ianao. Raha tokony hanatsara kokoa ny lisitry ny SEO ianao dia mety hanimba ny orinasa raha toa ka hitan'i Google fa mampiasa an'io fomba io ianao mba hahazoana fifamoivoizana amin'ny tranokalanao.